Our MOQ 1000pcs, We are customize paper packaging manufacturer, ထုံးစံစက္ကူထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက် 15 နှစ်ပေါင်း, premium packaging solutions bring more value to your product.
ပစ္စည်း MOQ 1000pcs တရုတ်ပေးသွင်းသူသည်သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောပုံနှိပ်ခြင်းတင်းကျပ်သောစက္ကူအံဆွဲခုံလက်ဝတ်ရတနာလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်း
H.S. ကုဒ် 48191000000
ထုတ်ယူခြင်းပြီးပြီ Glossy / Matt Varnish, Glossy / Matt Lamination, ရွှေ / sliver သတ္တုပါးပုံနှိပ်, ခရမ်းလွန်အစက်အပြောက်, ဖောင်း, စသည်တို့.
စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှု စက္ကူထုပ်ပိုး, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, ချောကလက်, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဆေးရွက်ကြီး, အစားအစာ, လက်ဆောင်နေ့စဉ်ကုန်စည်, အီလက်ထရောနစ်, အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း, လက်ဆောင်ကစားစရာများ, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ, အထူးပစ္စည်း, ပြပွဲ, ထုပ်ပိုး, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စသည်တို့.
မင်္ဂလာပါ ဖဲကြိုးလက်ကိုင်, PP ကြိုးကိုင်တွယ်, ချည်လက်ကိုင်, Grosgrain ကိုင်တွယ်, နိုင်လွန်ကိုင်တွယ်, လိမ်စက္ကူလက်ကိုင်, Flat Paper Handle, Die- ဖြတ်လက်ကိုင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အားသာချက် 100% အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားနှင့်အတူ Manufactory
လက်မှတ် BSCI, ISO9001 / 14001, BV TUV SGS FSCetc.
Present packaging box are made by rigid paper and widely used for Chocolate, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဆေးရွက်ကြီး, အစားအစာ, လက်ဆောင်နေ့စဉ်ကုန်စည်, အီလက်ထရောနစ်, အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း, လက်ဆောင်ကစားစရာများ, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ, အထူးပစ္စည်း, ပြပွဲစသည်တို့.
မေး: သင်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား ?
မေး: သငျသညျ OEM သို့မဟုတ် ODM ကိုလက်ခံနိုင်ပါသလား?
မေး: သငျသညျနမူနာပေးသလား? ဒါအခမဲ့ပါလား?
အမှတ်အသားများ (Tags)：စိတ်ကြိုက်လက္ကားဖိနပ် box ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း, အံဆွဲ Box ကို